पाइलट हुन् हिम्मतवाली सदिक्षा! बोल्नेहरूको त प्रहरीले यस्तो गर्छ भन्दै यसरी भ’क्कानिइन् (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > पाइलट हुन् हिम्मतवाली सदिक्षा! बोल्नेहरूको त प्रहरीले यस्तो गर्छ भन्दै यसरी भ’क्कानिइन् (भिडियो हेर्नुस्)
पाइलट हुन् हिम्मतवाली सदिक्षा! बोल्नेहरूको त प्रहरीले यस्तो गर्छ भन्दै यसरी भ’क्कानिइन् (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 23, 2021 February 23, 2021 भिडियो, समाचार	0
उर्लाबारी ः गत पुस ५ गते म,ृत फेला परेका उर्लाबारी ६ का ३१ वर्षीय युवा प्रवीण बास्तोलाको ह,त्या भएको भन्दै मृतकका परिबार आन्दोलित बनेका छन् । आइतबार प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाएपछि आज पुन उनीहरू प्रहरी कार्यालय अगाडी प्र,द,र्शन र ना,रा,बा,जी गरिरहेका छन् ।
घट,ना,को मिसिल बनाउँदा प्रहरीले मृ,त,कको सट्टामा अर्कै ब्यक्तीको तस्बिर राखेको मृ,त,क,की बहिनी सदिक्षा बास्तोलाले बताएकी छन् । यस्तै मृ,त,क,का ज्वाइँ दीपेन्द्र पौडेलले यो घ,टना,मा प्रहरीको पनि मिलेमतोको आशङ्का गरेका छन् । उनले घ,टनालाई क,म,जोर पार्न खोजेर प्रहरीले न्या,य मा,रेको उनले बताए ।
यसैबिच, इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेलले प्रहरीले घ,ट,ना,मा कुनै कमी कमजोरी नगरेको बताएका छन् । उनले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि श,ङ्का नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । मृ,त,कका परिवारले कि,टानी जा,हेरी दिएपछि जोरहीका आधारमा प,क्राउ परेका ब्यक्तीहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पु-याएको र ठोस सबुत प्रमाणको अभावमा उनीहरूलाई सफाइ दिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि मृ,त,कका आफन्त तथा छिमेकीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी अगाडी प्रदर्शन र ना,रा,बा,जी गरिरहेका छन् । अहिले केहिबेरमा मृ,त,क,का परिवार तथा आफन्तसँग प्रहरीले छलफल गर्न लागेको छ ।
‘अर्को साल बिहे गर्छु, छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु’ भनेका दाजुको कसरी मला’मी जान सकूँ? महान चेली समिक्षाको रोद,न (भिडियो सहित)
दाइको न्यायको लागि सामाजिक संजालमा यतिबेला खुलेरै लाग्ने यी हुन् श्री एयरलाइन्सकि पाइलट दुर्गा! (हेर्नुस् तस्विरहरू)
निर्मला पन्त जीवितै हुँदाको त्यो दुर्लभ भिडियो भेटियो, यस्ती थिइन् निर्मला पन्त(भिडियो )
BREAKING….अाफ्नै बुबाले गरे दुई सन्तानको हत्या Rip ..मुटु बलियो पारेर हेर्नुहोस कसरी निर्दोस सन्तानको हत्या गर्यो ?
विश्वमा नेपालभन्दा राम्रो ठाउँ अर्काे कुनै छैन: अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी